people Nepal » यस्ता छन् सेक्सलाई रोमाञ्चक बनाउने सूत्रहरु… यस्ता छन् सेक्सलाई रोमाञ्चक बनाउने सूत्रहरु… – people Nepal
यस्ता छन् सेक्सलाई रोमाञ्चक बनाउने सूत्रहरु…
यदी तपाई आफ्नो बेडरुमको जिवन लाई अझै रङगिन र रोमाञ्चक बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा किताब सहयोगी बन्न सक्छ। जुन किताबमा बेडरुमको जिवनलाई अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्ने तरिकाहरुको बारेमा उल्लेख गरीएको छ। त्यो किताब हो, “The4secrets of amazing sex”.
“The4secrets of amazing sex” नामको किताब Georgia Foster र Beverley Anne Foster दुई जना मिलेर लेखेका हुन। किताबमा सेक्सको लागी शरिर दिमागको तालमेल हुनु पर्ने कुरा दर्शाईएको छ। किताबमा उल्लेख गरीएका ४ तरिकाहरु यस प्रकार छन ।
1. SEDUCTION: पहिले तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई के ठिक लाग्छ र के मन पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको लागी धेरैले सोच्छन की आफुलाई सेक्सी फील गर्नु जरुरी हुन्छ तर यस्तो होईन। त्यस समयमा त्यस्तो के चिज छ जसले आफुलाई सेक्स तिर लैजादै छ, त्यसको बारेमा सोच्नु पर्दछ र त्यसको बारेमा ईच्छा शक्ती जगाउनु पर्दछ।
2. SENSATION: डरुम रोमान्सको अर्को पाटो हो सिक्स्थ सेन्स, दुवैको सिक्स्थ सेन्समा सेक्स कतिको मजा लिन सकिन्छ त्यो भर पर्दछ। यहाँ आफ्नो पार्टनरको उर्जा लाई महसुस गर्ने क्षमतालाई सिक्स्थ सेन्स भन्न खोजिएको हो। यसको साथै पार्टनरको गंध, स्पर्श, आवाज र स्वादको पनी याद राख्नु जरुरी हुन्छ ता कि यसले तपाईको अन्तरङ पलको याद दिलाओस।
3. SURRENDER: तपाई आफ्नो पार्टनर सँग सेक्स गर्ने मन बनाईसक्नु भएको छ भने आफुलाई आफ्नो पार्टनर सामु सुम्पिनुहोस। यसो गर्दा तपाईको पार्टनरले तपाईलाई रोमाञ्चक तरिकाले फील गर्न सकोस।
4. REFLECTION: भनेको पहिलेका पलहरु पछी सम्झेर त्यही कुरा दोहोर्याउने चाहना राख्नु हो। यदी तपाईले माथीका तिन कुराहरुमा आफुलाई फरक महसुस गर्नु भयो भने तपाईलाई त्यो समय हरपलको लागी यादगार रहन्छ र यदी सुखद रहेन भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्दछ जस्तै सेक्स गर्न मन नलाग्ने र त्यो समयमा आत्मविश्वाशमा कमी आउने। एजेन्सीको सहयोगमा ।